Boeing na-edozi ikpe obodo MAX mana akwụkwọ FlyersRights na-aga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Boeing na-edozi ikpe obodo MAX mana akwụkwọ FlyersRights na-aga n'ihu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Boeing na-edozi ikpe obodo MAX mana akwụkwọ FlyersRights na-aga n'ihu.
Ihe mberede ET302, yana okuku ụgbọ elu Lion Air Flight 610, ihe karịrị ọnwa anọ tupu mgbe ahụ, gburu mmadụ 357.
FlyersRights.org na-aga n'ihu na-ekpe ikpe ya, ndị ọkachamara nchekwa ụgbọ elu nọọrọ onwe ha na-akwado.
Ebumnuche nke ịgba akwụkwọ FlyersRights bụ ịmanye FAA ka ha wepụta nkọwa ndozi MAX na ule ụgbọ elu.
Mkpesa FlyersRights.org megide Boeing ga-abụ otu n'ime ụzọ ole na ole iji nweta eziokwu na aza ajụjụ maka mkpọka 737 MAX.
Boeing ebibiela ikpe obodo ya na ndị niile ma e wezụga ezinụlọ abụọ nke ndị ihe mberede ụgbọ elu Ethiopian Airlines 302 Boeing 737 MAX mere na Maachị 10, 2019. Mkpọka ET302, yana ihe mberede Lion Air Flight 610, ihe karịrị ọnwa anọ tupu mgbe ahụ. , gburu mmadụ 357.
FlyersRights.org, Otú ọ dị, na-aga n'ihu na ya, na-akwado ndị ọkachamara nchekwa nchekwa onwe ha, iji manye FAA ịhapụ nkọwa MAX fix na ule ụgbọ elu. FAA, na Boeing's behest, edebewo nzuzo niile data metụtara MAX n'okpuru a na-azọrọ nke ahia nzuzo, n'agbanyeghị Boeing's na FAA otutu nkwa nke zuru nghọta.
Boeing anabatala ụgwọ maka nkwụghachi ụgwọ nke ihe mberede ụgbọ elu Etiopia nke ụgbọ elu 302 kpatara, na ezinaụlọ ndị ihe metụtara nwere ike ịchụso nkwụghachi ụgwọ na Illinois. Agbanyeghị, nkwekọrịta ahụ gbochiri mmebi ntaramahụhụ, mmebi nke gaara taa Boeing ahụhụ maka omume jọgburu onwe ya ma gbochie Boeing na ndị ọzọ omume dị otú ahụ n'ọdịnihu.
"Nke a mmezi pụtara na FlyersRights.org ikpe megide Boeing ga-abụ otu n'ime ụzọ ole na ole iji nweta eziokwu na ịza ajụjụ maka mkpọka 737 MAX," Paul Hudson, Onye isi oche nke FlyersRights.org kwuru. "Site na ịzere nchọpụta na ntinye akwụkwọ n'okwu ikpe obodo ndị a na mgbakwunye na ịzenarị ikpe mpụ na ntaramahụhụ dị ukwuu na nkwekọrịta ya na gọọmentị etiti, Boeing agbanarị naanị site n'ịkụ aka n'aka n'ihe gbasara ụlọ ọrụ na ịdị ukwuu. nke ajọ omume ya.”
N'ụzọ doro anya, Boeing na-atụ anya inwe ike ịzenarị nkwupụta nke CEO David Calhoun, onye bụbu onye isi ala Dennis Muilenburg, na ndị ọrụ ndị ọzọ. Boeing kwetara na Ngalaba Ikpe Ziri Ezi na nkwekọrịta agbagoro agbagoro na Jenụwarị 2021, na-akwụ $ 244 nde na ntaramahụhụ mana ekwenyeghị ikpe ọ bụla.